IV Nzukọ Kwa Afọ nke Inter-American Network nke Cadastre na Land Registry
Colombia, site na nkwado nke Organizationtù Amerịka (OAS) na World Bank, ga-anabata “IV Kwa Afọ Conference of the Inter-American Network of Cadasters and Property Registry” nke a ga-eme na obodo Bogotá, na Disemba 3, 4 na 5, 2018.…
Mkpa nke mbenata ndị intermediaries na njikwa ndekọ - Cadastre
N'ihe ngosi m na nso nso a na Seminar na Ọganihu nke Multifinality Cadastre na Latin America, nke emere na Bogotá, m lekwasịrị anya na-ekwusi ike mkpa ọ dị itinye nwa amaala na etiti uru nke usoro ọgbara ọhụrụ. O kwuru usoro usoro na ntinye nke Cadastre - njikwa ndekọ, na-ekwusi ike na ...
Nke a bụ aha Seminar a ga-eme na Bogotá, Colombia site na November 2 ruo 26, 2018, nke ndị Colombia Colombia nke Cadastral Engineers na Geodests ACICG haziri. Nkwupụta na-akpali mmasị, bụ nke a gbalịsiri ike iji mee ka ndị na-ekwu okwu mba na mba ụwa site na ngalaba ụlọ ọrụ, ...
Kedu ka nchịkwa ala ga-adị n'ọdịnihu? - ọhụụ nke Cadastre 2034
Gwa ihe nchịkwa ala nwere ike ịdị ka na 2034 adịghị ka echiche dị mfe, ọ bụrụ na anyị ahụ ọtụtụ mgbanwe gbanwere n'ime afọ 20 gara aga. Otú ọ dị, mmega ahụ bụ nnwale nke abụọ n'ihe emere 20 afọ tupu Cadastre 2014. Paytụle obere ihe na nkwupụta ndị a nwere ike ịbụ na ị ga-efu gị ...
Decentralization nke ọrụ Registration-Cadastre na ọha mpaghara
Nke a bụ ihe ngosipụta nke ihe ngosi na-atọ ụtọ nke ga-ewere ọnọdụ na Nzukọ Kwa Afọ na Ahịa, nke Annlọ Akụ oredwa na-akwado na ụbọchị na-abịanụ nke March 2017. Alvarez na Ortega ga-eweta na ahụmịhe nke iwepụta ọrụ ndekọ / ọrụ Cadastre na ụdị Front -Back Office, na nke a, Banklọ akụ Onwe, dika ...
cadastre, Akụziri CAD / GIS
Ntinye LADM iji INTERLIS - Colombia
N'izu nke atọ nke ọnwa June 2016 ka enyere INTERLIS Course, hụrụ ka asụsụ na ngwa ọrụ iji kwado mmejuputa Land Administration Domain Model (LADM) na gburugburu ala nchịkwa nke Colombia. Emepụtara usoro a na nkebi abụọ, otu na ọkwa dị elu / usoro iwu na nnukwu ìgwè ...
cadastre, Akụziri CAD / GIS, Geospatial - GIS
Blockchain na Bitcoin etinyere ndị Land Administration
N'ime ọgbakọ omebe iwu teknụzụ, onye editọ nke akwụkwọ akụkọ bịakwutere m, onye jụrụ m banyere itinye ụdị teknụzụ a n'ọrụ na mpaghara Ndebanye aha Ngwongwo, Cadastre na Nchịkwa Ngwongwo n'ozuzu. Mkparịta ụka ahụ abụghị ihe na-atọ ụtọ, n'agbanyeghị na o juru m anya na ọ jụrụ m, na-atụle ...
cadastre, Apụta, innovations, My egeomates
Nlekọta nke ụwa bụ ugbu a bụ otu n'ime nsogbu ndị isi na mba. Ọ bụghị ọchịchọ ọhụrụ, ebe ọ bụ na ọrụ ya karịrị ihe doro anya na isi isiokwu nke usoro iwu na iwu dị iche iche na-achịkwa mmekọrịta nke ndị bi na akụ na ụba nke ọha na eze. Na-enweghị…
III Mgbanwe Ahụmahụ nke Cadastre, Ndebanye aha na Ala Ala - Mmetụta mbụ
Mgbe ụbọchị nke abụọ nke ụbọchị atọ metụtara ụbọchị emere na ebumnuche nke Nzukọ South-South International, na Granada, Nicaragua. Ndị a bụ ihe mbido m. Banyere Ebe ahụ Obi abụọ adịghị ya, maka ndị na-esiteghị na Nicaragua, ahụmịhe nke gburugburu ebe obibi nwere nnukwu mmetụta. Ọnọdụ okpomọkụ na ọsụsọ na-agba mmiri ...